Somaliland oo sheegtay in goob shacabka ka caaggan laga dhigayo degaannada u dhexeeya Gabiley iyo Boorama ee ay colaaddu ka taagan tahay. [Akhris …] – Radio Daljir
Ceel-bardaale, July 13 – Ciidamada Somaliland ayaa ku dhaqaaqay in ay saldhigyo ka samaystaan goobihii colaadda ba’an ragaadisay ee degaanka Ceel-berdaale u dhexeeya degmooyinka Gabiley iyo Boorame.
Tallaabadan ayaa ka dambaysay markii qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Somaliland lagu faray in degaanka colaad beeleedku ay ka oogantahay ee Ceel-berdaale laga dhigo goob ka caaggan in hubka lagu qaato, isla markaana reebban sheegashada mid ka mid ah beelaha halkaas isku qoomay.
Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Somaliland oo nuxurkiisa lagu soo koobay shan qodob ayaa lagu faray in degaanka Ceel-bardaale laga dhigo goob ciidan oo ka caaggan in shacabku ay hub la dhex joogaan, isla markaana ciddii ka soo horjeesata qoddobadaas sharciga lala tiigsado.
Qoraalkaas oo maalin ka hor ka soo baxay xafiiska madaxaweyne Rayaale ayaa u dhignaa sidatan:-
“Wuxuu Madaxweynuhu kulan fadhiya la yeeshay odayaasha Gabiley ee ka hadlayey arrinta Ceelberdaale, taasi oo madaxweynaha iyo odayaashu ay isku afgarteen, kuna qaateen balan cad, in cidii xaq leh sidii xuquuqdooda loo siin lahaa, loona joojin lahaa colaaddambe oo sii socota.
Haddaba, ayaan darro arrintaasi warbaahinta qaar kood ayaa si masuuliyad darro ah uga been sheegay wixii ay ku wada hadleen Madaxweynaha iyo odayaashu, iyaga oo sheegay in khilaaf ku kala tageen, taasi waxay sababtay in dhinaca bariga jiida Ceelberdaale ay dagaal soo qaadeen oo ay hal qof ka dileen dhinaca galbeedka.
Haddaba shir ay maanta (shalay) yeesheen guddi ka tirsan Golaha xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland, oo uu guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa kadib markii ay xukuumaddu aragtay shaqaaqadii ka taagnayd Ceelberdaale in loo bedelay wejiyo kale oo lagu wiiqayo qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland, iyada oo xalay (Habeen hore) fiidkii dad wada marayey lagala degay baabuurtii ay saarnaayeen, qaarna lagu kaxaystay oo lala tagay meelo ka baxsan wadada oo 4 (AFAR) ka mid ahna lagu laayey, gaadiid iyo hantidii saarnayd la lunsaday,
arrintaasi waxay xukuumaddu u aragtaa arrin laga leexiyey wixii la isku hayey oo wejiyo kale oo qarsoonaa ay ka soo baxeen.
Sidaa darteed, xukuumaddu waxay go?aan ku qaadatay:
1. In dadkii jid-gooyada sameeyey in la soo qabto, sharcigana la horkeeno.
2. In jiida laga dhigay Zone ciidamadu ka hawlgalaan, kana reeban cid hub ku dhex haysata barigeeda iyo galbeedkeedaba, cidii lagu arko is ururina tallaabo sharciya laga qaado, hubkana laga ururiyo sharcigana la horgeeyo.
3. Warbaahinta muujisay masuuliyada darradana waa in si degdeg ah talaabo sharciya looga qaado.
4. Taliyayaasha ciidammada waxa la farayaa in ay ciidan ku filan geeyaan jiidaas oo aan lagu arrag jiidaas wax hub sita, masuul kasti oo ciidan ahna oo jiidaas ku suganna waa in uu u fuliyaa awaamiirta la siiyey sida ay yihiin.
5. Cid kasta oo arrinta colaadaasi ku abaabusha erayo colaadeed, ficil, odhaah ama qoraal ee hurisa colaadaasi waa in talaabo sharciya laga qaadaa.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo labada taliye ciidan (taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha ciidanka qaranka) iyo hay?addaha sharciga, maamulada gobolada iyo degmooyinka jiidaasina waxa dhammaantood la farayaa inay go?aamadaasi sidooda u fuliyaan.”